Iingcinga malunga neIndiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Kuluntu lwanamhlanje, ingcinga yolubawo ifumana ukubaluleka ngakumbi nangakumbi. Sihlala singqongwe ngabo, bayaphindwa okanye bagxekwe ngenxa yokunxibelelana kwabo nekhethe. Ngomnye wemiba ephikisanayo ephononongwa ngokusisigxina.
Ukuhamba lelona yeza lilungileyo ngokuchasene neenkolelo kunye nokucalulwa. Ivula iingqondo zethu ngeendlela eziliwaka kwaye isenze sikhule ukuba sililiqonde ilizwe kwaye, ngokubanzi, izinto ezininzi ebomini.
Onke amazwe aneenkolelo. Umzekelo, eNgilane ukutya kubi kakhulu, ukuba eFrance bayazingca kakhulu okanye eSpeyin wonke umntu uyazi ukudanisa i-flamenco. Kwenzeka into efanayo nakumazwe akude njengeIndiya. Kodwa, Zeziphi ezona zinto zixhaphakileyo ngeIndiya?
1 Yintoni uhlobo olwahlukileyo?
2 Zithini iingcinga malunga neIndiya?
2.1 Soloko uthabatha amanyathelo ngokutya kwamaNdiya
2.2 AmaIndiya angabachasi beenyoka
2.3 AmaIndiya ahlwempuzekile, kodwa onwabile
2.4 I-Indiya iyaxakaniseka kwaye ayihoywanga
2.5 AmaIndiya athetha isiHindi
2.6 Bonke abafazi baseIndiya banxiba iisaris
2.7 Onke amaIndiya enza iyoga kwaye athi Namaste
2.8 Iinkomo zihambahamba ezindleleni
Yintoni uhlobo olwahlukileyo?
Ngokutsho kweRAE (iRoyal Spanish Academy) uhlobo lomntu "ngumfanekiso okanye umbono oqhele ukwamkelwa liqela okanye uluntu olunomlinganiso ongaguqukiyo." Oko kukuthi, umbono ngokubanzi wokuba umntu unokukholelwa ntoni malunga neqela labantu abaneempawu, iimpawu okanye isimilo. Ezi ntelekelelo zakhiwe ngokwasentlalweni kwaye zinika umbono womlinganiswa okanye amasiko endawo.
Zithini iingcinga malunga neIndiya?
Soloko uthabatha amanyathelo ngokutya kwamaNdiya
Ukutya kwamaNdiya kumnandi! Nangona kunjalo, ukhe weva kwizihlandlo ezininzi, ukuba Xa usiya kwilizwe kufuneka ulumke kuba ungaziva ungonwabanga xa usitya kwizitali zezitalato. Ngokwenyani, le yinto enokwenzeka naphina ukuba sithenga ukutya kwiindawo ezinempilo yococeko okanye ukuba sisela amanzi angenabhotile.
Ngezikhokelo ezimbalwa, ungonwabela ukutya kwaseIndiya ngaphandle kokufumana isisu somhambi owaziwayo okanye uphethwe ngumkhuhlane. Akukho sidingo sokuzibamba!
Ngakolunye uhlangothi Kukho inkolelo yokuba konke ukutya kwamaIndiya kuneziqholo. Uninzi lwabantu aluthandi okanye aluthandabuzi ukuzama ukutya kwamaNdiya kuba bakholelwa ukuba zonke izitya zinencasa kwaye iya kubanika isisu esibuhlungu njengoko bengasiqhelanga, kodwa akukho nto inyanisekileyo.
Le yingxoxo kuba ayikuko konke ukutya kwamaIndiya okuneziqholo. Ngapha koko, kukho izitya ezingekhoyo njengoDal Makhani, isuphu yeentiliti enevumba lekoriyandire. Okanye isosi ye-korma, uhlobo lwecryry ethambileyo eyenziwe ngamandongomane nakwikhilimu. Asinakho ukulibala nokuba sisosi se raita, esenziwe ngekhukhamba kunye neyogathi eya kuhlaziya nasiphi na isidlo.
AmaIndiya angabachasi beenyoka
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba amaIndiya ngabathakathi beenyoka. Nangona kunjalo, inyani yile ukwenziwa kweenyoka ezinomtsalane akukho semthethweni kwezinye iindawo kwaye ke akuvumelekanga e-India, nangona ezinye iinyoka zisekhona nanamhlanje.
AmaIndiya ahlwempuzekile, kodwa onwabile
Xa kwakhululwa ifilimu iSlumdog Millionaire, ubuhlwempu babonakaliswa ematyotyombeni apho isenzo senzeka khona saba nempembelelo enkulu kwindlela iIndiya eyabonwa ngayo kwihlabathi liphela. Abahambi abaninzi bayothuka xa bebona imeko yentlupheko abantu abaninzi abahlala eIndiya, Ukujongana nobunzima bemihla ngemihla ngoncumo. Kodwa ngokuchasene nenkolelo edumileyo, ayililo lonke ilizwe elihlwempuzekileyo.
Abanye babantu abazizityebi emhlabeni bahlala eIndiya kwaye kumaxesha akutshanje iklasi ephakathi echumayo iyavela ngenxa yemfundo kunye nokuphuculwa kwengqesho. Baninzi abantu abasindayo ubuhlwempu kwaye bafikelela kubomi obungcono.
I-Indiya iyaxakaniseka kwaye ayihoywanga
Nangona kusenokubakho iindawo ezixhotyiswe ngakumbi kwaye ukugcwala kwabantu ngamanye amaxesha kuyabethabethana, eIndiya njengakuwo onke amazwe kukho iindawo apho iipaka, iihotele eziphambili kunye namaziko okuthenga, iivenkile zokutyela ezilungileyo kunye neeklabhu zasebusuku zigcwele.
AmaIndiya athetha isiHindi
Olu stereotype luxhaphake kwilizwe liphela. Abantu abaninzi ngempazamo bakholelwa kwelokuba igama elithi "Hindu" libhekisa kwinkolo nakulwimi olusemthethweni eIndiya. Nangona kunjalo, oku akunjalo kuba ulwimi lubizwa ngokuba sisi-Hindi ngelixa iingcali zobuHindu zibizwa ngokuba ngamaHindu.
Ngakolunye uhlangothi, I-Hindi ayisiyiyo kuphela ulwimi elizweni njengoko mmandla ngamnye unolwimi lwawo. Abahambi abaninzi bayothuka ukufumanisa ukuba kukho amaIndiya angathethi isiHindi kodwa yinyani. Ngapha koko, isi-Hindi asifundiswa kwezinye izikolo kwaye oku kunjalo ikakhulu eMzantsi India apho iilwimi ezinemvelaphi ye-Dravidian zithethwa khona.
IsiHindi lulwimi oluthethwa ikakhulu eMantla eIndiya kodwa kumaIndiya amaninzi lulwimi lwabo lwesibini. IsiNgesi, okwangoku, sithetha kakhulu kwilizwe liphela.
Bonke abafazi baseIndiya banxiba iisaris
Isari yingubo yesiko labafazi baseIndiya kunye ne icon yenkcubeko. Igama "sari" livela kwisiSanskrit kwaye lithetha "ilinen band" kuba le yesinxibo yenziwa ngeqhiya elingenamthungo elidluliswa entlokweni kwaye lisonge umzimba womfazi ngathi yingubo.
Yisuti entle, entle nengenaxesha. Nangona kunjalo, abafazi baseIndiya abanxibi ii-saris kuphela njengoko bahlala benxiba ezinye iintlobo zesinxibo, ezisesikweni nezingaqhelekanga. Umzekelo, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kukho abantu basetyhini abanxiba isalwar kameez (eyakhiwe ngengubo yangaphantsi nebhulukhwe kunye nesikhafu) ngakumbi eMantla eIndiya. Abanye bakhetha iimpahla zasentshona kwizixeko ezikhulu ezidibanisa zombini iifashoni.
Onke amaIndiya enza iyoga kwaye athi Namaste
I-Yoga sisiqhelo esithi, ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokuzilolonga, sidibanisa umoya, ingqondo kunye nomzimba. AmaIndiya aye azazi izibonelelo zawo kangangeenkulungwane kodwa eNtshona kungamaxesha akutshanje apho sele ithandwa kakhulu. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabantu basemzini lucinga nge-India kunye nenkcubeko yayo njenge-mecca yokomoya. Nangona kunjalo, ayingawo onke amaIndiya abandakanya iyoga kubomi babo bemihla ngemihla. Olu luhlobo olwahlukileyo.
Kwelinye icala, nangona igama elithi namaste liyinxalenye yenkcubeko yelizwe, kwizixeko ezikhulu okwangoku ibekelwe iimeko ezisesikweni okanye ukunxibelelana nabantu abadala. Ngapha koko, ixhaphake kakhulu kwimimandla esemantla apho kuthethwa khona isiHindi esisulungekileyo ngelixa sinqabile kumazantsi eIndiya apho isiHindi singelolwimi lokuqala.
Iinkomo zihambahamba ezindleleni
Enye yeemifanekiso zokuqala eziza engqondweni xa sicinga ngeIndiya ziinkomo ezingcwele. Ngaba ngokwenene bahambahamba kwiidolophu zaseIndiya? Ewe kunjalo, le stereotype iyinyani. Ayizukuthatha ixesha elide ukuzibona zithatha uhambo kuso nasiphi na isixeko. Bahamba bethe cwaka phakathi kweemoto, ngenxa yoko abaqhubi kufuneka balumke ukuze baphephe iingozi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iingcinga malunga neIndiya